Daawo+Akhriso+Dhageyso Mu’asasada Al-kataa’ib Oo Soo Bandhigtay Maxbuus Kenyaati Ah – Bogga Calamada.com
Daawo+Akhriso+Dhageyso Mu’asasada Al-kataa’ib Oo Soo Bandhigtay Maxbuus Kenyaati Ah
September 28, 2016 6:59 pm Views: 29
Idaacada Islaamiga Andalus ayaa turjumo kusameysay maxbuuska kenyaanka ah ee lagu soo bandhigay isdaarki ay soo saartay muâ€™asasada Al kataaib garabka warbaahineed ee mujaahidinta xarakada alshabaab.
Halkan Hoose Ka Daawo Filimka Maxbuuska Kenya.
Halkan Kala Dag Turjumada Fariinta Maxbuuska Kenyaanka Ah.
Halkan Ka Akhriso Fariinta Askariga Kenyaatiga Ah Oo Af-somali Lagu Tarjumay.
Magaceyga oo dhameystiran waa Loanard Maingi Kiiyo. Waxaan ahay muwaadin Kenyan ah, waxaan 1976-kii ku dhashay deegaanka lagu magacaabo Tulimani oo ka tirsan qeybta booni ee iyadana taabacsan degmada Makueni. Waxaan ciidamada Kenya ku soo biiray sanadku markuu ahaa 1997.
Waxaan ahay dhaqtar ka shaqeeye qeybta kal-kaaliye-nimada ee guutada 9aad ee dagan xerada Mooya, waxaana ahay mas’uulka heysta qeybta caafimaadka ee guutadan, anigoo ka dhignaa kalkaaliye sare.
1-dii bishi January ee sanadkii 2016-ka ayaan imid Soomaaliya, waxaana ku biiray ciidamada AMISOM ka dibna waxaa na loo qaaday magaallo lagu magacaabo Ceel-Cadde. Markii aan meeshaas degnayna waxaa na soo weeraray Al-Shabaab 15-kii bishii January ee 2016-ka.
Ka dib markii uu weerarka dhacayna, hubkeenii oo dhan wuxuu u gacan galay Al-Shabaab. in ka badan 100 ka mid ah askartii saaxiibadeyda ahayd waa la dilay, qaar kale oo aan aniga ku jirana nolosha ayaa lagu qabtay.
Fariinteyda ugu horeysa waxaan u dirayaa qoyskeyga iyo qaraabadeyda guud ahaan. Waxaan doonayaa in aan u sheego in aan jeclahay oo aan u duceeyo, iyagana aan ka rajeynayo in ay ii soo duceeyaan. Maxbuus ahaan rajada kaliya ee aan leeyahay waa iyaga.
Waxaan ka codsanayaa in ay aadaan Odayaasha dhaqanka, Kaaba-qabiilada, gudiyada, xildhibaanada,Senatarada, iyo gudoomiyeyaasha gobolada oo ay ka dalbadaan in ay kala shaqeeyaan sii deynteyda iyo sidii aan xuriyadeyda ku heli lahaa. Xaqiiqdii waxaan ku jiraa xaalad xun oo rajo beel ah, waxaana doonayaa in aan dib ugu soo noqdo Kenya.
Waa idinka rajada kaliya ee aan hadda fiirsanayo, waxaana idiin rajeynayaa in aad u midowdaan sida ugu dhaqsiyaha badan, si wadajir ahna uga wada shaqeysaan sidii la ii bad-baadin lahaa.
Fariinteyda labaad waxay ku socotaa dadweynaha reer Kenya guud ahaan, waxaana leeyahay: waxaan idinka codsanayaa in aad u midowdaan sidii aan xuriyadeyda ku heli lahaa.
Waxaa la igu xabisay meel aanan la aqoonin oo halkaan Soomaaliya ah, waana meel aanan aqoonin, Waa nala jabiyey, waana nala qabtay.
Hadda oo aan idinla hadlayo, waxaan ahay maxbuus dagaal oo ku jira gacanta Al-Shabaab, mana ahi kaligeyga oo waxaa ila jooga qaar ka mid ah saaxiibadeyda.
Waxaan ka codsanayaa dadka reer Kenya in ay u midoobaan arinteena oo madaxdeena ka dalbadaan sidii aan xuriyadeena ku heli lahayn.
Maalin kasta waxaan ku duceysanaa in dadka reer Kenya ay u midoobaan darteena, ayna naga caawiyaan sidii aan ku xuroobi lahayn.
Fariinteyda saddexaad waxay ku socotaa adiga oo ah Uhuru Kenyatta, mudane madaxweyne adiga ayaa ah Abaanduulaha guud ee ciidamada Kenya, waxaana raacnaa awaamiirtaada haddii aan nahay ciidanka, waxaan qaadanay towjiihaadkaaga, waxaana ka gudubnay xuduudda oo waxaan galnay Soomaaliya, ka dibna waxaan aadnay magaalada Ceel-Cadde, halkaas oo ay nagu soo weerareen Al-Shabaab 15-kii January ee sanadkan 2016-ka.
Waxaan isku daynay in aan is difaacno laakiin waa nala jabiyey, hubkeeniina gacanta ayaa lagu dhigay. In ka badan 100 askari ayaa la dilay, Aniga iyo koox saaxiibadeyda ahna nolosha ayaa lagu qabtay, hadana waxaan nahay maxaabiis marka mudane madaxweyne adiga ayaa leh awood iyo sharciyad buuxda oo aad ku xaqiijin karto in aan ka soo baxno jeelka Al-Shabaab ee Soomaaliya.
Waxaan kaa codsanayaa mudane madaxweyne adiga iyo dhamaan hogaanka dowlada Kenya in aad dib uga fikirtaan mowqifkiina oo aad Alshabaab kala hadashaan sidii aan xuriyadeena ku heli lahayn.
Xaqiiqda taalla saaxada halkaan Soomaaliya ah ayaa waxay tahay in ciidamada Kenya uu soo gaaray dharbaaxooyin dhowr ah iyo qasaarooyin culus oo ay kala kulmeen gacmaha Al-Shabaab, sidaas darteed waxaan kaa codsaneynaa mudane madaxweyne in ciidamadeena soo haray ee hadda ku sugan gudaha Kenya aad ka saarto Soomaaliya, aadna dib ugu celiso wadankooda Kenya.
Madaxweynaheyga qaaliga ahow waxaa laga yaabaa in tani ay noqoto fursadii ugu dambeysay ee aan codsigeyga kugu soo gudbiyo adigoo ah abaanduulaheygii aan ka soo shaqeyn jiray, sidoo kalena aan jeclahay. Fadlan aqbal dalabkeyga oo la wada hadal Al-Shabaab, sidoo kalena ogolow dalabaadka ay wataan si aniga iyo saaxiibadeydaba aan xuriyadeena u helno.
Fadlan waan ku baryeynaa madaxweyne.